मध्यराति १२ बजे देखि ३ बजे सम्मको समयमा जन्मिएकाहरु कति भाग्यमानी ? हेर्नुहोस् ! – Jagaran Nepal
एक व्यक्तिको जन्म भएपछि, उसको मुहूर्ता र नक्षत्र कुन तर्फ छ , कुन मितिमा, कुन पक्षमा उसको जन्म भयो ,त्यसले उसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। कुन प्रहरमा जातकको जन्म भयो भन्ने थाहा भएर मात्र उसको भविष्य निर्धारण गर्न भने निकै गार्हो हुन्छ किनकि यसको लागि नक्षत्र, मुहूर्ता जस्ता कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको जन्म कुन प्रहरमा भएको सम्बन्धमा सामान्य जानकारी ।
रातको तेस्रो प्रहर
रातको तेस्रो प्रहारलाई त्रियामा भनिन्छ । यो प्रहर रातको १२ बजे देखि ३ बजे सम्मलाई मानिन्छ । यो समयलाई मध्य रात्रि पनि भनिन्छ । यो समयलाई तामसिक मानिन्छ । यस समयमा जन्म हुने व्यक्तिले आफ्नो घरबाट टाडा गएर सफलता पाउँछन् । यो पनि मनिन्छ कि यी व्यक्तिहरूको आफ्नो परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन , त्यसैले उनीहरू घर परिवारबाट टाढा बस्छन्। तर यो उनीहरुको भविष्यको लागि भने राम्रो हुँदैन । उनीहरुको जीवन निकै नै संघर्षपूर्ण हुन्छ ।
यो समय प्राय: त पूर्ण विश्रामको हो । यस प्रहारमा खानपान, नुहाउने वा ध्यान नगरेको राम्रो मानिन्छ । यदि गल्तीले पनि तपाईंले यस्तो कार्य गर्नु भयो भने ठुलै नुक्शान हुन सक्छ । यो प्रहरमा केहि प्राथना गर्नुभयो भने तुरुन्त फलदायक हुने विस्वास छ ।